CARUURTA SOOMAALIYEED EE QAAWAN IYO QOLALKA INTERNET-KA
Waxaan baryahaan danbe soo batay caruuro Soomaaliyeed oo iyagoo qaawan lagu soo bandhigayo qolalka kala duwan ee Internetka, caruurahaas oo jaaliyaddaha Soomaaliyeed ee dibadaha ku dhaqan loo waydiinayo taageero dhaqaale, si xaaladaha caafimaad ee liita ee caruurtaasi wax looga qabto.
Hadaba aniga oo aad u taageersan in dhamaan cidii dhibaataysan ama xanuun/jiro aad u liidata oo u baahan caafimaad dibadeed loo gargaaro gacan insaanimo, Muslinimo iyo Soomaalinimoba loogaysto, gaar ahaana caruuraha iyo maatada Soomaaliyeed meelkasta iyo gobolkasta oo ay ku sugan yihiinba, ayaa hadana damiirkayga iyo indhahaygu diideen daawashada iyo eegmada caruurtaasi.
Arintaan kor ku xusan oon mudo qalbigaygu ka gilgilanayay oo run ahaantii ayba ahayn in wakhti hore aan ka hadlo ama maqaal ku muujuyo diidmadayda ayaa waxaaba maanta soo dadajiyay qormadaydan kadib markii aan arkay gabar aad u yar oo soomaaliyeed oo lagu soo bandhigay Cawradeeda Qolka la magac baxay Somalitalk.com taas oo cawradeedii si aad u qalafsan loogu soo bandhigay halkaasi. Arinkani ma aha markii ugu horaysan een arko waxaanse oran karnaa wuxuu arinkani gaaray heer aad u fool xun aa mudan in laga hadlo oo aan indhaha laga qabsan. Qolalka falkaan foosha xun caadaystayna waxaa ka mid ah Somalitalk iyo Dayniile, oo labadaba laga yaabo in ay isleeyihiin waxaad samaynaysaan arin bini-Aadanimo iyo Islaanimo laakiin waxay isku khaldeed laba qodob oo kala ah gaargaar iyo cawrada caruurto oo sidii carwo lasoo bandhigo.
Sababaha aan u arko in arintaasi tahay mid ka soo horjeeda , diinta, damiirka iyo dadnimadaba loona baahan yahay in maamulayaasha qolalka internet-ku ka waantoobaan waxay tahay:
1- Cawrada caruurta oo la soo bandhigayo si (public) ah iyagoo qaawan oo qof kastaa arki karo oo arin aad u xun, ama aanba haboonayn taasna ayba noqon karto mid hadii aysan ka waantoobin qolalkaasi aanu ku dacwayno shariikadaha (host)ga ama ay isticmaalaan si looga xiro qolalkaasi
2- Sawiradaasi inay damiirka iyo mustaqbalka caruurtaasi meel ka dhac u tahay, oo barito wiilka ama inanta yare ee maanta gargaarka caafimaad loo doonayaa barri wuxuu noqon aabe ama hooyo, cawradooda oo la soo bandhigaana maaha mid qabata.
3- Sawiradaan yaa kafaala qaaday in aysan qolyaha (pedophiles) ama caruuraha qaawan jecel ama (child ponograph) kuwa ka baayacmushtara caruurta qaawan inaysan koobi ka samaysanayn kadibna ku soo bandhigayn qolalkooda.
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Geed kasta in gubtaa waa hoostaalaa” sidaa awgeed caruuraha dhibaatada caafimaad daro hayso gobolkasta iyo dalkasta oo caalamka dushiiga saaran way ku sugan yihiin una baahan yihiin gargaar, laakiin qaabka codsi ee aan caruurteena Soomaaliyeed ee dhibaataysan ugu soo bandhigno qolalka internet ku waa mid khilaafsan dhamaan qaabanka codsi ama gargaar ee caalamka laga yaqaano, meesha keliya ee caalamka qofku ku tuugsado oo soo bandhigo dhaawaciisa waa dalka hindiya oo iyaduna dhamaan dadka damiirka leh uu qalbigoodu diido waydiisashada caynkaas ah, maxaad moodaa inagoo Muslim ah oo la doonayo inaynu si huwan oo Akhlaaqda Islaanimo iyo damiirka Soomaalinimo la doonayo inaynu dhowrno oo shay kasta xadkiisa iyo xaqiisa siino.
Sidaa awgeed caruurteena waynu taagiiri laakiin waa in la dhowro xaqooda oo la asturo cawradooda.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa in hadii ay qolalka internet-ka ee aan kor ku xusay ay ka waantoobi waayaan laga qaadi doono talaabo waafaqsan waxa ay samaynayaan oo ah in Caalamku uusan raali ka ahayn kana noqon doonin soo bandhigista caruurta qaaqaawan, Hadii islaanimadii iyo Soomaalinimadu ina celin waydana sharciga u degen shabakadaha internet-ka uu awood u leeyahay in laga xiri qofkasta oo qolkiisa ku soo bandhiga caruur qaawan oo cawradoodu dibata taalo.
Waxaan filayaa in dad badan oo Soomaaliyeed jiraan gaar ahaan Jaaliyadda dibada dalka ku sugan ay jecelyihiin taageero iyo gacan inay ka gaystaan waxtarka caruurta soomaaliyeed ee tabaalaysan laakiin aysan jeclaysan qaabka qaawan ee ubadkeena loogu soo bandhigayo internetka.
QORAALKII HORE EE JABARTI....GUJI
Ugu horayn walaal jawaabta waxaan u deyney akhristayaasha, maadaama aan halkan daabacadeeda gacanta ku hayno ayaanaan rabin in aan jawaabta ku talax tagno, waxaanse ku xusuusineynaa in ay ku haboonaan lahayd in aad waqti badan ku bixisid sidii aad uga gilgilan lahayd kuwa sababta u ah in carruuteenii sidaas u tabaaloobaan, kuwa waddanka ku aasay sunta loo malaynayo in ay cuduradan cusub sababta u yihiin. Tan kale walaal maahmaahdii Soomaaliyeed ha ilaawin ee macneheedu ahaa: "haddii dani timaado quda qarsi ma jiro". Balse inta aadan dhaaran tab aad ciyaalkan ugu gargaareysid keen. Qoraalkaagana kuma xusna qorshe ka fiican ka aad xustay in aan soo bandhinay.
Tan kale waxaan kaaga mahad celineynaa sida dhiiran ee aad qoraalka aad nagu canaananeyso noogu soo dirtay, waxaana cad kalsooni aad ku qabtid SomaliTalk.com in aad noogu soo tebisey arin canaan ah adigoo ku kalsoonaa inaan sida ay tahay kuugu soo daabaci doono, waana kaaga mahad celineynaa taas. Waana meesha aan k afileyno in ay kasoo bixi doonto Soomaali si xor ah wax isugu sheegi kara, is dhaliili kara, is canaanan kara, waxa ay isku canaananayaana uu yahay wax u qabadka bulshada.
GABAR YAR OO AAN KAADIDA CESHAN KARAYN
Maryan waa gabar 15-bilood jir ah, waxay ku dhalatay ayada oo aan kaadida ceshan karayn isla markaasna ka jirran xubnaha kaadi mareenka, waxayna u baahan tahay qalliin iyo kaalmo.... Guji...
Ugu dambayntana wixii talo iyo nasteexo ah ee kujira qoraalkaaga waa qaadanay, una fiirso walaal xaqiiqadii intii aanaan helin qoraalkaaga ayaan cawrada gabada qarinay codsi aan ka helay akhristayaasha awgeed, anagoo markii hore ujeedadanadu ahayd inaan si cad dadka u tusno xaqiiqada rasmiga ah ee gabadhan yar. Hadda yeynaan xooga ku jeedin jawaab iyo mudac iyo mudac calee, ee aan ku jeedino sidii aan gabadhan yar wax ugu qaban lahayn, intii aan bini aadamku awoodo. Dhankanaga wixii aan markii hore ku gafney Saamax ayaan golaha weydiisanay, Allaha awooda sare lehna cafid ayaan ka baryeynaa.